ထကျထကျမိုးဦးရဲ့တူမခြောလေး နနျးထကျထကျဦးနဲ့ သီခငျြးသဈ MV တဈပုဒျကို အတူတူတှဲဖကျရိုကျကူးခဲ့တဲ့ စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျ…. – Shwewiki.com
သရုပျဆောငျ အကယျဒမီ ထကျထကျမိုးဦးရဲ့ တူမ အလှမယျ နနျးထကျထကျဦးကတော့ မန်တလေးမွို့မှာ ပွုလုပျတဲ့ Miss Golden Land Mandalay Region 2016 ပွိုငျပှဲမှာ 1st Runner Up ဆုရှငျတဈယောကျဖွဈခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
နနျးထကျထကျဦးကတော့ လကျရှိမှာလညျး မျောဒယျလျ၊ သရုပျဆောငျတဈယောကျအဖွဈ အနုပညာအလုပျတှကေို ဆကျလကျလုပျကိုငျနပွေီး ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို ခံယူနဆေဲပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီတဈခေါကျမှာလညျး နနျးထကျထကျဦးက အဆိုတျော စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျရဲ့ “သနားသောအားဖွငျ့” ဆိုတဲ့ သီခငျြး MV လေးမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျပေးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
သီခငျြးအမြိုးအစားလေးကတော့ အလှမျးအဆှေး ပုံစံလေးဖွဈပွီး စိုငျးစိုငျးနဲ့ နနျးထကျထကျဦးတို့ ရဲ့ ပထမဆုံး တှဲဖတျသရုပျဆောငျထားတာပဲဖွဈပါတယျ..
စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျနဲ့ နနျးထကျထကျဦးတို့ သနားသောအားဖွငျ့” ဆိုတဲ့ သီခငျြး MV လေးမှာ ဘယျလိုမြိုး တှဲဖကျညီညီ သရုပျဆောငျခဲ့ပွီး ရိုကျကှငျးနောကျကှယျမှာ ဘယျလိုတှေ ကွိုးစားခဲ့လဲဆိုတာ ပရိသတျကွီးအတှကျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။
နနျးထကျထကျဦးကတော့ စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျရဲ့ သီခငျြး MV မှာ သီခငျြးလေးနဲ့ လိုကျဖကျအောငျ အကောငျးဆုံး ကွိုးစားသရုပျဆောငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးအတှကျ နနျးထကျထကျဦးပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ “သနားသောအားဖွငျ့” MV လေးကို မြှဝတေငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော။
သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ တူမ အလှမယ် နန်းထက်ထက်ဦးကတော့ မန္တလေးမြို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ Miss Golden Land Mandalay Region 2016 ပြိုင်ပွဲမှာ 1st Runner Up ဆုရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နန်းထက်ထက်ဦးကတော့ လက်ရှိမှာလည်း မော်ဒယ်လ်၊ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ခံယူနေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း နန်းထက်ထက်ဦးက အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ “သနားသောအားဖြင့်” ဆိုတဲ့ သီချင်း MV လေးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်းအမျိုးအစားလေးကတော့ အလွမ်းအဆွေး ပုံစံလေးဖြစ်ပြီး စိုင်းစိုင်းနဲ့ နန်းထက်ထက်ဦးတို့ ရဲ့ ပထမဆုံး တွဲဖတ်သရုပ်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်..
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့ နန်းထက်ထက်ဦးတို့ သနားသောအားဖြင့်” ဆိုတဲ့ သီချင်း MV လေးမှာ ဘယ်လိုမျိုး တွဲဖက်ညီညီ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုတွေ ကြိုးစားခဲ့လဲဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
နန်းထက်ထက်ဦးကတော့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ သီချင်း MV မှာ သီချင်းလေးနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားသရုပ်ဆောင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် နန်းထက်ထက်ဦးပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “သနားသောအားဖြင့်” MV လေးကို မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မကွာခငျမှာ ၄၁ နှဈပွညျ့တော့မယျ့ ဝါရငျ့သရုပျဆောငျ စိုးမွတျနန်ဒာ…!!!!